Ifulethi labantu abangu-4 ❤️ 3min ukuhamba ngezinyawo ukuya ku-GEM/Tram/Gare ❤️ #C1
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
U-Oriane unokuphawula okungu-4429 kwezinye izindawo.
I-T2 enhle kakhulu ehlome ngokuphelele eduze kwesikole se-GEM 🧡 Management.
⭐ Thola ifulethi lethu elikhulu lokulala elingu-33m² elise-Rue Félix Esclangon eGrenoble. 🏔
**✓ Indawo yakho yokuhlala:**
🏢 Leli fulethi eliphansi livikelwe ngomnyango wokungena okabili.
- ihholo lokungena elinendawo yokugqoka,
- Igumbi lokuhlala / igumbi lokudlela,
- ikhishi elihlome ngokuphelele,
- Igumbi lokugezela elinebhavu, indishi yokugezela kanye ne-WC.
🛌 Ifulethi linezindawo zokulala ezi-2: igumbi lokulala elinemibhede yabantu ababili kanye nombhede wosofa osendaweni yokuphumula. (Wonke amafasitela anamakhethini namashutha).
⭐ Hamba ngokunethezeka ngenxa yezinsiza ezisefulethini, njengomabonakude, uxhumano lwe-wifi yamahhala yesivinini esikhulu, izinto zasekhishini (isitsha sezitsha ezingu-4, i-Bosch Tassimo capsule coffee maker - amaphilisi awanikeziwe, ihhavini, ifriji/ifriji, njll.. .), indawo yokugcina (igumbi lokugqoka), umshini wokuwasha, umshini wokomisa izinwele, ilineni lombhede namathawula abantu abangu-4 lapho befika.
Ukushisisa umuntu ngamunye.
🔒 Ukulandela ukubhukha kwakho: Ukuze sikwamukele endaweni enhle ngempela futhi sigcine indlu yethu iyinhle njengoba injalo, idiphozithi ekhadini lakho lesikweletu izocelwa ngozakwethu othembekile "Swikly". Ngemva kokuqinisekisa ukubhukha kwakho, uzothola i-imeyili evela ku-"Swikly" ekucela ukuthi uqinisekise ukufaneleka kwekhadi lakho lesikweletu. Lokhu kuqinisekisa kuzosiqinisekisa ngenani uma kwenzeka okuthile efulethini. Akukho okuzovinjwa noma kuthathwe ku-akhawunti yakho. Sicela uqaphele ukuthi ngaphandle kwale diphozithi, ukufinyelela endaweni yokuhlala ngeke kuthunyelwe kuwe, futhi ukubhuka kwakho ngeke kubuyiselwe imali. Qaphela: Le diphozithi yamukelwa nakwa-Airbnb naku-Booking.com kuwebhusayithi yabo.
**✓ Indawo yayo: **
📍 Itholakala endaweni yokuhlala ethule kakhulu enezitolo zasendaweni e-Cours Berriat, unesitolo esikhulu eduze nendawo yokuhlala. Ukufinyelela okuqondile nokusheshayo (3 amaminithi) ku-GEM
🚌 Ukuhamba :
I-Tram B: 2 min ukuhamba ngezinyawo ukuya enkabeni yedolobha, Presqu'Île, esiteshini sesitimela (5 min ukuhamba)
Ukufinyelela okuqondile ukusuka kumgwaqo omkhulu, phuma ku-2.
🚗 Ukupaka kungenzeka endaweni yokupaka izimoto.
**✓ Izintandokazi zethu 💗 **
Ukuhlelwa kwefulethi: kuthule futhi kuyindawo yokuhlala 🧡
Ihlonyiswe ngokugcwele! Hlala futhi ungakhathazeki ngento!
**✓ Sicela uqaphele ngaphambi kokubhuka: **
💁♀️ Sihlakaniphile futhi unokufinyelela ngokuzimela endaweni yokuhlala. SiseGrenoble futhi sihlala sitholakala kuzo zonke izicelo zakho!
🧹 Izindleko zokuhlanza zihlanganisa umbhede nelineni lokugezela, ngakho hamba ngokuthula kwengqondo! Ngenxa yemithetho yezempilo nezokuphepha, amashidi namathawula azoshiywa embhedeni wakho.
🤝 Lena yindlu yobumbano! Zonke izindleko zokuhlanza zikhokhwa ngokugcwele ezinhlanganweni ezimbili (izisebenzi ezikhubazekile ze-E.S.A.T. kanye nokuhlanza ubumbano).
3.71(7 okushiwo abanye)
Hlola ezinye izinketho ezise- Grenoble namaphethelo